magaalada Muqdisho oo maalintii Afaraad shir ay leeyihiin Golaha Midowga Musharaxiinta ka socda. | Dayniile.com
Home Warkii magaalada Muqdisho oo maalintii Afaraad shir ay leeyihiin Golaha Midowga Musharaxiinta ka...
magaalada Muqdisho oo maalintii Afaraad shir ay leeyihiin Golaha Midowga Musharaxiinta ka socda.
Waxaa magaalada Muqdisho ka socdo maalintii Afaraad oo xiriir ah shir ay leeyihiin Golaha Midowga Musharaxiinta, kaasi oo looga arrinsanayo xaalada dalka iyo arrimaha doorashooyinka.
Shirka maanta ayaa si gaar ah waxaa diirada loogu saaray sidii looga hortegi lahaa boobka uu Goluhu sheegay in lagu hayo doorasahda Golaha Shacabka oo ka socota guud ahaan dalka.
Daahir Maxamuud Geelle, Afhayeenka Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in uusan wax isbedel ah ku iman mowqifka Midowga Musharaxiinta, kadib kulankii ay la qaateen Ra’iisul Wasaaraha dalka oo asagu gacanta ku haya maamulka doorashada.
“Golaha Midowga Musharaxiinta mowqifkiisi ku aadana arrimaha socda in wax iska bedelay aysan jirin, uuna aaminsan yahay waxa socda inay yihiin doorasho boob qaawan oo aan doorasho lagu sheegi karin,” ayuu yiri Daahir Geelle.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Golaha Midowga Musharaxiinta uu sii wadi doono kulamada looga arrinsanayo xaalada dalka, kuwaasi oo ay la qaadanayaan odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa ujeedkooda waxa uu yahay inay saamileyda siyaasadeed saxaan qalalaadka ka jira doorashada, si loogu gudbo hanaan doorashooyin oo la aqbalsan yahay, sida uu sheegay Afhayeenka Golaha.
Xubnaha ku bahoobay Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay walaac xoogan ka muujinayeen hanaanka ay ku bilaabatay doroashada Golaha Shacabka, ayaga oo la kulmeyna Ra’iisul Wasaaraha, si loo saxo qaladaadka ka jira doorashada.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo habka fogaan aragga kulan kula qaatay Guddiyada Doorashooyinka
Next articleGuddoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Gobalka Banaadir oo ka qeybgashay tartan Kubadda cagta ah
Yemeni troops liberated the country, attacking the Houthi
axmed shiikh - December 10, 2021 0
Yemeni government troops have liberated much of the land in the Maqbna region, northwest of the Taiz region, after fierce clashes with the Houthi-backed...
Soomaaliya-Kenya ICJ: Afar qodob oo qareenada Soomaaliya ee ICJ ay diiradda...
Qoor Qoor oo soo saaray liiska Musharrixiinta Xubnaha uga haray Aqalka...
Guddiga Maamulka doorashooyinka heer federaal ayaa diiday in musharaxiinta xildhibaanada ay...
Ra’isul wasaare Rooble oo Warbixin ka dhagaystay Guddiga dhismaha waddada isku...
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xiisad ama Xukun!
Guddiga hirgelinta doorashooyinka Gobolada Waqooyi oo dib u dhigay doorashada xubnaha...